Torkia: Ny fanitsakitsahana ny fahalalaham-pitenenana amin’ny aterineto · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Febroary 2019 3:22 GMT
Torkia, ilay demaokrasia maoderina izay mirehareha amin'ny maha-fanjakana laika azy na dia eo aza ny tsindry goavana avy amin'ny Islamista fondamentalista dia indrisy anefa fa tena mavitrika amin'ny famerana ny fahalalaham-pitenenana an-tserasera ity firenena ity.
Nosakanana tao amin'ny firenena noho ny filazana fa nanitsakitsaka ny zon'ny fizakamanana sy ny zon'ny mpamorona hatramin'ny 18 septambra 2009, MySpace, tambajotra sosialy malaza sy ny Last FM- izay ahafahanao mihaino mozika maimaim-poana dia .
Araka ny Reporters Sans Frontières ,
“Matetika ny fizakamanana no ampiasaina ho antony amin'ny fanivanana ny aterineto,”
Mety hisy fiantraikany amin'ny fifandraisany amin'ny Vondrona Eoropeana ny fanapahan-kevitr'i Torkia amin'ny fanivanana ny aterineto satria
“Fandikana ny Fifanarahana Eoropeana Momba ny Zon'olombelona, ​​izay nosoniavin'i Torkia ny fanapahana ny fidirana amin'ny tranonkala izay tsy avy amin'ny mpitsara fa avy amin'ny baikon'ny mpampanoa lalàna .”
Tsy dingana voalohany amin'ny fanapaha-kevitr'i Torkia hanaraha-maso ny aterineto ny fanapahan-kevitra hanakanana ny MySpace. Tamin'ny taona 2008, voarara ny sehatra mpampiantrano bilaogy Blogger (an'ny Google), ny tranonkala fifampizarana lahatsary malaza YouTube ary ny tranonkala miisa 850 eo ho eo, araka ny tatitra nivoaka tao amin'ny The Christian science Monitor.
Nitranga ny fanapahan-kevitra handrara ny YouTube rehefa niseho tao amin'ilay tranonkala ny lahatsary “manivaiva” an'ilay mpanorina ny firenena Mustafa Kemal Atatürk .
Tao amin'ny tatitry ny The Christian Science Monitor, niaro ny fanapaha-kevitry ny firenena amin'ny fanaraha-maso ny aterineto ny minisitry ny fitaterana Tiorka.
“Ny ady atao amin'ny singa mikendry ny fanimbana ny fiarahamonina sy ny fanapoizinana ny tanora sy ny ankizy no asa fototra ho an'ny firenena tsirairay. Manana fitsipika samihafa mifandraika amin'ny Aterineto ny firenena tsirairay. “
Raha hamantatra bebe kokoa momba ny fahalalaham-pitenenana any Torkia, indrindra fa ny fomba fiantraikan'ny andininy amin'ny fehezan-dalàna famaizana amin'ny zon'ny olom-pirenena momba ny fahalalaham-pitenenana ao amin'ny firenena dia indro misy tatitra nataon'i Jody Sabral tao amin'ny Press TV (natao tamin'ny 8 May 2008).